प्रसारण लाइन अनिश्चित, त्रिशूली कोरिडोरमा २ सय ६५ मेगावाट विद्युत खेर जाँदै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
प्रसारण लाइन अनिश्चित, त्रिशूली कोरिडोरमा २ सय ६५ मेगावाट विद्युत खेर जाँदै
बैशाख ३१, २०७५ 3597 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई हुँदा त्रिशूली नदी कोरिडोरमा निर्माण भइरहेका २ सय ६५ मेगावाटका आधा दर्जन आयोजनाको विद्युत खेर जाने सम्भावना देखिएको छ ।
विद्युत उत्पादन हुने समयभित्र प्रसारण लाइन तयार नहुने हुँदा विद्युत खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएको हो । उक्त कोरिडोरमा दर्जनौं आयोजना निर्माणाधीन छन् । तर, आधा दर्जन आयोजना २ वर्षभित्रै पूरा हुँदैछन् ।
त्रिशूली तथा यसका सहायक नदीमा निर्माणाधीन आधा दर्जन आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ । रसुवामा निर्माण भइरहेका १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनको निर्माण करिब ७० प्रतिशत पूरा भएको छ ।
यसैगरी, नुवाकोटमा निर्माण भइरहेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ पनि अन्तिम चरणमा छन् । रसुवागढी तथा सान्जेनबाट सन् २०१९ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
माथिल्लो त्रिशूलीबाट पनि सन् २०१९ को फेब्रुअरी ९ मा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ । तर, त्यतिबेलासम्म प्रसारण लाइन तयार हुने सम्भावना देखिँदैन ।
रसुवामा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत २२० केभी चिलिमे हबबाट २२० केभीे त्रिशूली–३ ‘बी’ हबमा ल्याउने योजना छ । तर, यो खण्डको काम ५० प्रतिशत पनि पूरा नभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
समस्या बेलैमा समाधान नभए उत्पादित विद्युत जोड्न समस्या हुने माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ का आयोजना निर्देशक फणिन्द्रराज जोशीले बताए । ‘एउटा टावर पातलेवनको भाइनयार्ड रिसोर्टमै पर्छ, सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रमा पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसले आयोजना पूरा भए पनि विद्युत जोडिँदैन ।’
समुन्द्रटारदेखि मातातीर्थसम्म १ सय ४२ टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १ सय १० टावर निर्माण भइसकेको छ । स्थानीय समस्याकै कारण चिनियाँ ठेकेदार चाइना वाटर एन्ड इन्जिनियरिङले लक्ष्यअनुसार काम नगरेको जोशीले बताए ।
चिलिमे तथा त्रिशूली–३ ‘बी’ हब र उक्त क्षेत्रमा लक्षित प्रसारण लाइन निर्माणपछि करिब २ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत काठमाडौं भित्रिन्छ । भविष्यमा चिलिमे देखि त्रिशूली–३ ‘बी’ हबसम्म ५ सय ७६ मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने अनुमान छ ।
यस्तै, त्रिशूली–३ ‘बी’ हबबाट ११ सय १० मेगावाट विद्युत काठमाडौं आउन सक्छ । बाडभञ्याङमा मर्स्याङ्दीबाट आएको प्रसारण लाइन ‘ट्यापिङ’ गरी थप ८ सय मेगावाट विद्युत काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ ।